efijery extruder vy tsotra amin'ny endrika boribory
harato tariby tsotra, mazàna dia misy suuare harato sy bolongana dutch ary harato herringbone .Ny iray amin'ireo "sivana namboarina" mahazatra indrindra dia ny efijery extruder. Indraindray ireo sivana ireo dia antsoina koa hoe fonosin'ny efijery, samy manana ny zavatra mitovy izy ireo.
Ny efijery extruder dia ilaina amin'ny extruder amin'ny polymer na plastika. Hizaha ny zava-drehetra efijery extruder ato amin'ity lahatsoratra ity isika, manomboka amin'ny famaritana ka hatramin'ny vidiny ka hatramin'ny fomba anaovana azy ireo.
Ny efijery Extruder dia misy karazana harato tariby voapaika. Ireo fitaovana dia vy tsotra, vy tsy misy fangarony ary fitaovana hafa. ny fonosana lamba vy tsy manara-penitra dia mahazaka harafesina kokoa noho ny materail hafa. Stainless Steel Extruder Screens dia be ampiharina amin'ny plastika extruder,, granulator, ary tsy tenona lamba, loko masterbatch, sns harato: 10 ~ 400Mesh kapila manana endrika samy hafa, toy ny boribory, toradroa, voa, boribory ary azo atao arakaraka ny fangatahan'ny mpanjifa ....
Galvanized dia tsy vy na firaka; dia dingana iray izay ametahana firakotra zinc fiarovana amin'ny vy mba hisorohana ny harafesina. Ao amin'ny indostrian'ny harato tariby anefa dia matetika no raisina ho sokajy misaraka izy io noho ny fampielezana azy amin'ny fomba rehetra amin'ny karazana fampiharana rehetra. Ny galvanized Wire Mesh dia vita amin'ny tariby vy nandrisika. Izy io koa dia azo vita amin'ny tariby vy ary avy eo ny savonin'ny zinc. Amin'ny ankapobeny, lafo kokoa ity safidy ity, manome tahan'ny fanoherana ny harafesina avo kokoa. ...
Ny vy tsotra, fantatra amin'ny anarana hoe vy karbonika, dia vy be mpampiasa amin'ny sehatry ny harato. Ny vy sy karbôna kely dia voalohany. Ny lazan'ny vokatra dia noho ny fihenan'ny vidiny sy ny fampiasa amin'ny laoniny. Volon-tariby lemaka, fantatra ihany koa amin'ny lamba vy balck .lazo mena mainty. Vita amin'ny tariby vy ambany karbaona izy io, noho ny fomba fanenomana samy hafa .dia azo zaraina ho, tenona tsotra, tenona dutch, tenona herringbone, tenona dutch tsotra. Plain vy tariby harato no stro ...
Anaran'ny entana: epoxy mifono tariby mifono harato sy harato tariby isan-karazany Fitaovana: vita amin'ny tariby vy malefaka tsara kokoa, tariby vy tsy misy fangarony, tariby firaka alimina, epoxy mifono aorian'ny fanenomana tsotra. Loko isan-karazany ho an'ny safidinao. Endri-javatra: Mavesatra maivana, malefaka tsara, mahazaka harafesina tsara ary rivotra, mora diovina, marevaka ary sariaka tontolo iainana. Sehatry ny fampiharana: Ity famaritana ity dia mihatra amin'ny epoxy mifono tariby harato (karazan-damba; manenona tsotra) ho an'ny sivana vita amin'ny volo vita amin'ny ...
Ny harato vy vita amin'ny kofehy vita amin'ny vy dia vita amin'ny tariby vy tsy misy fangarony. Ny tariby vy dia ny fanoherana, ny fanoherana ny hafanana, ny fanoherana ny asidra ary ny fanoherana ny harafesina. naoty samihafa amin'ny vy tsy misy fangarony no ampiasaina amin'ny harato tariby. ny vady tsy mitovy dia ampiasaina amin'ny fampiharana manokana hampiasa ilay trano tsy manam-paharoa. Mamoaka tariby harato amin'ny karazana endrika samihafa izahay. Ny fanenomana dia voafaritra arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa, toy ny fitaovana, ny savaivain'ny tariby, ny haben'ny harato, ny sakany ary ny lengt ...
Welded wire mesh dia vita amin'ny tariby vy ambany karbona avo lenta, voahodina amin'ny alàlan'ny fanamafisana mandeha ho azy sy fitaovana mekanika mandeha ho azy, ary avy eo elektro nandrisika nandrisika mafana, PVC ary fitsaboana hafa ho an'ny passivation sy plastika. Fitaovana: tariby vy ambany karibonetra, tariby vy tsy misy fangarony, sns .. Karazan-jiro: vy harato vita amin'ny fantsom-pifandraisana, PVC harato tariby, tontonana vita amin'ny vy, volo vy vita amin'ny vy tsy voavaha, sns.
Ny vy metaly nitarina dia vy metaly zavatra noforonina tamin'ny fanitarana vy harato totohondry sy ny fanetezam-boaloboka hamorona harato. Fitaovana: takelaka aliminioma, takelaka vy ambany karbaona, takelaka vy tsy misy fangarony, lovia nikela, takelaka varahina, takelaka firaka magnesium aluminium, sns. Fanenomana sy toetra mampiavaka azy: vita amin'ny fanisiana tombo-kase sy famelarana ny takelaka vy. Ny faritry ny harato dia manana ny mampiavaka azy amin'ny fahamendrehana, ny fanoherana ny harafesina, ny fanoherana ny hafanana avo, ary ny valin'ny rivotra madio. Karazana: mifanaraka ...
Izahay dia manamboatra Nickel Mesh, Nickel Wire Mesh, Nickel Expaced Metal ary Nickel Mesh Electrode ho an'ny bateria. Ireo vokatra ireo dia vita amin'ny akora nikela avo lenta sy avo lenta. Izahay dia mamokatra ireo vokatra ireo manaraka ny fenitra indostrialy. Ny Nickel Mesh dia azo zaraina ho karazany roa: ny harato nikela (lamba tariby nikela) ary ny metaly nitarina. Ny perla tariby nikela no ampiasaina matetika amin'ny haino aman-jery sivana sy ny electrode cell fuel. Izy ireo dia tenona misy tariby nikela avo lenta (fahadiovana> 99.5 na pu ...